Umangalele izikhulu ze-1KZNTV nabambheca ngezinsolo zokunukubeza
USIHLALO webhodi le-1KZN TV uMnuz Themba Fakazi, umangalele abesiteshi nabesifazane abamsola ngokubanukubeza ngokocansi Isithombe: SIGCINIWE
Bongiwe Zuma | September 14, 2021
OWANQOBA icala nongusihlalo webhodi le-1KZNTV, ubagixabeze ngamasamanisi abathathu abayizikhulu abamsola ngokukhwabanisa nabesifazane abathi uyabakunubeza, kulesi siteshi sethelevishini.
Ngo-2018 Isolezwe lashicilela udaba ngoSihlalo we-1KZNTV uMnuz Themba Fakazi, owayesolwa ngokukhwabanisa imali ye-1KZNTV kwathiwa unukubeza nabesifazane. Kwathiwa ukhwabanise uR7 million, kwabuye kwawuR10 million kwagcina sekuwuR12 million. Icala langena enkantolo kodwa lagcina lichithiwe.
UFakazi usemangalele izikhulu zesiteshi nabesifazane abamsola ngokubanukubeza ngokocansi.
Leli phephandaba lithole ukuthi kwaxoshwa abasebenzi abangaphezulu kuka-30 ngo-2019 okuthiwa babesolwa ngokusondelana noFakazi, kanti abanye ngabesifazane abanqaba ukubhala izitatimende.
Omunye wesifazane utshele iphephandaba ukuthi waxoshwa ngoba wanqaba ukubhala isitatimende esevalelwe ehhovisi, encengwa.
"Sase sisebenza ngokwesaba. Uma kuphume into eyiqiniso kumaphephandaba ngoFakazi, sibizwe sisatshiswe sonke esingazibhalanga izitatimende. Sasiceliwe sonke abesifazane esaqashwa nguFakazi, ukuthi sibhale izitatimende sithi ubesinukubeza. Mina nomngani wami sanqaba. Sathwala kanzima sesiphila ngezincwadi zesixwayiso. Baze bathola intuba ngeCovid-19 basixosha sonke bathi bayadiliza ngenxa yemali, emuva kwalokho baqasha abanye," kusho owesifazane.
UFakazi uthe okwamanje ngeke ageqe amagula ngoba udaba lusingethwe ngabameli kodwa uyafisa ukubona kwenzeka ubulungiswa ngoba wahlambalazeka. Wathi izinsolo zamehlisa isithunzi ngisho kwezamabhizinisi ngoba wavela njengomuntu obenukubeza abesifazane ngokocansi.
"Udaba selukubameli bami. Ngicela nithinte bona bazonichazela,“ kubeka uFakazi.
Ummeli wakhe uNksz Nozipho Myende weNG Myende & Associates, ukuqinisekisile ukuthi bavulelwe amacala abaphathi nabesifazane.
"Likhona icala lokudicilela phansi isithunzi esisebenzela phezu kwalo. Lawa amanye okwamanje ngeke ngiwaqinisekise ngoba sisawasebenza," kusho uNksz Myende.